छात्रवृत्ति : लघुकथा - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ६ माघ २०७७, मंगलवार १९:१२ मा प्रकाशित
घरमा उत्साहको वातावरण थियो । सुमन र स्मारिकाले पहिलो सन्तान पाएका थिए । दुवैले सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनबाट बधाइ पाए।
गरिब घरपरिबारका भएपनि दुवै जनाको सानो जागिर र मेहनतले एउटा छोरा (सुविन)लाई लालनपालनमा ठिकठाक पुगेकै थियो, त्यसैले उनीहरूले दोश्रो सन्तानको बारेमा कहिलेकाही जिस्किए पनि गम्भिरतापूर्वक सोचेनन ।
छोरो बढ्दै गयो । छोरालाई बर्कतले भ्याएसम्म राम्रो विद्यालयमा भर्ना गरे । छोराको चाहना र शिक्षाको परिपुर्तिमा कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनीहरू दुवैजनाको तलबले सहरकाे बसाइ र छोराको शिक्षामा सकिन्थ्यो त्यसैले धेर थोर बचत पनि गर्न सकेनन् ।
छोराले विज्ञान विषयमा उत्कृष्ठ श्रेणीमा राम्रो विद्यालयबाट उतिर्ण गर्यो । उनीहरूको चाहना र छोराको चाहना बमोजिम छोराले एमविविएस (डाक्टर) पढ्ने इच्छा गर्यो । उनिहरूसँग छोरालाइ डक्टर पढाउने पैशा त थिएनन तर छात्रवृत्तिमा नाम निस्किएमा मात्र पढाउन सकिने अवस्था थियो ।
छोरा एमविविएस प्रवेशिका (इन्ट्रान्स) परिक्षाको तयारी गर्यो । अन्नतः छोराले एमविविएस (डाक्टर) को प्रवेशिका (इन्ट्रान्स) परिक्षा पास गर्यो तर शुल्क तिर्ने गरेर !
उनीहरूको छोराको भन्दा कम नम्बर ल्याएका तर सामुदायिक विद्यालयमा पढेका, जनजाति, पिछडिएका, आरक्षण काेटाबाट अरूले नाम निकाले तर सुविनको छात्रवृत्तिमा नाम निस्किएन ।
आज न त (सुमन) उसलाइ आजसम्म आफ्नाे छाेरामा गरेकाे लगानीमा पश्चाताप र ग्लानी थियाे न त उसकाे छाेराेकाे मेहनत लगनशीलतामा प्रश्न । केवल (सुमन) उसकाे मनमा पश्नहरू मात्र थिए !
दीपक बाेहरा “सन्दिप”